ultimate – Mingalar Hospital
Healing Hands, Caring Hearts.
Mingalar Hospital Mandalay
09 - 77 100 5885
58 Street, between 42 St & 43 St,
Mahar Aung Myay, Mandalay, Myanmar
No Comments on Standard Room
No Comments on Knee Replacement
Chemotherpy မင်္ဂလာဆေးရုံကြီးတွင် ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော Chemotherapy ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ…. ကင်ဆာဆိုသည်မှာ- ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များ အထိန်းအကွပ်မရှိပဲ ကြီးထွားပွားများလာခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။ မြစ်ပွားနာ ဟုလည်းခေါ်ကြပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိ​ု ကင်ဆာဖြစ်ပွား နိုင်ပါသည်။ ကင်ဆာရောဂါအတွက် ကုသနည်းများ မှာ- ခွဲစိတ် ဖယ်ရှားကုသခြင်း (Surgery) ကင်ဆာဆေးသွင်း ကုသခြင်း (Chemotherapy) ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်း (Radiation Therapy) ကိုယ်ခံအားဖြင့် ကုသခြင်း (Immunotherapy) ကင်ဆာဖြစ်ပွားသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းသို့ ကင်ဆာဆေးတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိစေသော ကုသခြင်း (Targeted Therapy) ဟော်မုန်းတိုးလျော့ခြင်းဖြင့် ကုသခြင်း (Hormonal Therapy) ၎င်းကုသနည်းများထဲမှ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းအပြင် မင်္ဂလာဆေးရုံတွင် ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါပြီ။ ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်နိုင်သောဆေးများကို သွေးကြောများမှ တစ်ဆင့်သွင်းကာ ကုသခြင်းဖြစ်သည်။ […]
Endoscopy Center မင်္ဂလာဆေးရုံကြီး တွင် နောက်ဆုံးပေါ်စက်သစ်ကြီးများဖြင့် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ရှုကုသခြင်း စတင်၍ ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်တယ်… Endoscopy မှန်ပြောင်းကြည့်ရှုကုသခြင်းဆိုသည်မှာ ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည့် ပိုက်ပျော့ဖြင့် အစာအိမ် နှင့် အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ရောဂါများကို မခွဲမစိတ်ပဲ ရှာဖွေစစ်ဆေး ကုသခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ပြောင်းကြည့်ရှုကုသရန် လိုအပ်သော လူနာများမှာ ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်လိုသူများ ဝမ်းဗိုက် မကြာခဏအောင့်သူများ အစာအိမ်ရောဂါ၊ အစာအိမ်အနာရှိသူများ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် သွေးယိုစိမ့်မှုရှိသူများ အူမကြီးကင်ဆာ သံသယရှိသူများ သွေးအားနည်းရောဂါရှိသူများ နာတာရှည် အသည်းရောဂါ (သို့) အသည်းခြောက်ရောဂါရှိသူများ အသက် (၅၀) ကျော်မှ အစာမကြေရင်ပြည့်ရင်ကယ် မကြာခဏ ဖြစ်တတ်သူများ ရောဂါရှာမတွေ့ဘဲ ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားသူများ အစာမျိုချရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိသူများ မကြာခဏ ပျို့အန်တတ်သူများ ကော်ဖီရောင် (သို့) သွေးအန်သူများ […]
No Comments on Endoscopy Center
Haemodialysis Center မင်္ဂလာဆေးရုံကြီး၏ ကျောက်ကပ်တုသွေးသန့်စင်ဌာန (Haemodialysis Centre) တွင် ကျောက်ကပ်သန့်စင်ခြင်းများကို (၄၈,၀၀၀) ကျပ်တည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။ ၁။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ကျောက်ကပ်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကျောက်ကပ်၂ လုံးသည် သွေးတွင်းမှ အညစ်အကြေးများနှင့် ပိုလျှံသောရေများကို နေ့စဥ်စွန့်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ကျောက်ကပ်များပျက်စီးပါက ထိုသို့မစွန့်ထုတ်နိုင်တော့ပဲ သွေးထဲတွင် အညစ်အကြေးများ၊ အဆိပ်များစုပုံလာပါသည်။ ထိုသို့ စုပုံလာရာမှ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးပါတော့သည်။. ၂။ ကျောက်ကပ်သန့်စင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ကျောက်ကပ်သန့်စင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိမိမိကျောက်ကပ်ဖြင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်လာသော အညစ်အကြေးများနှင့်ပိုလျှံသောရေများစွန့်ထုတ်ခြင်းကို အပြင်မှ စက်နှင့်ကူလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးလေ့ရှိသော အကြောင်းရင်းများမှာ Diabetes mellitus (ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ) Hypertension (သွေးတိုးရောဂါ) Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) Vasculitis (သွေးကြောရောင်ခြင်း) Polycystic Kidney […]
No Comments on Haemodialysis
Posted in health tips, special
မိခင်နို့တိုက်ခြင်း အနုပညာ တကယ်တော့ အောင်မြင်တဲ့ ကလေးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာ ကလေးမွေးပြီး ကလေး နဲ့ မိခင် အဆင်ပြေပြေ နို့ တိုက် နိုင်တဲ့အထိ ကိုခေါ်မယ်ဆို မမှားပါဘူး အရင်ကလေးမွေးထားဖူးပြီး နို့တိုက်ဖူးတဲ့ မိခင်တွေအတွက် ပြဿနာသိပ်မဟုတ်ပေမယ့် သားဦးမိခင်တစ်ယောက်အတွက်တော့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရတာဟာ စိတ်ရောလူရော တကယ်ပင်ပန်းတဲ့အတွေ့ အကြုံပေါ့ ဒါကြောင့် မိခင်နို့ အောင်မြင်စွာတိုက်ကျွေးရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ( WHO) နဲ့ UNICEF ကအများကြီး အားစိုက်ထုတ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ဘူး အရေးကြီးတာကိုးနော် မွေးကင်းစ ကလေးကနေ အသက် ၆ လ အထိ မိခင်နို့ လောက်ကောင်းတာ ရှိ မှ မရှိပဲ ဘယ်လောက် နို့ မှုန့် ကောင်းတဲ့ တံဆိပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါစေ […]
No Comments on breastfeeding
Posted in CSR, special
No Comments on Communication Training
Blood Donation at Mandalay General Hospital
No Comments on Blood Donation at Mandalay General Hospital
သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ထိန်းမ ထားရသော ဒူးဆစ်လေးများ၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ဒဏ်မဖြစ်စေရန် သတိထားပါ။ ဒူးဆစ်ကလေးများ ဒဏ်မဖြစ်အောင်
No Comments on knee pain protection
kidneys stone protection
ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ခြင်း ၁။ ရှောင်ရန် ဘီယာ၊ ကွမ်း၊ အရိုးပါဝါးစားရသော ငါးကလေး၊ ပုစွန်ကျော့၊ မှို၊ မျှစ်၊ ဝမ်းတွင်းသားကလီစာများ၊ နီသောအသား (ဥပမာ – အမဲသား၊ ဆိတ်သား)။ ၂။ လျှော့စားရန် ချဉ်ပေါင်၊ ဇီးသီး၊ ဟင်းနုနွယ်ရွယ်၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲပင်ပေါက်။ ၃။ လျှော့သောက်ရန် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ နွားနို့၊ ချောကလက် အလွန်အမင်းသောက်ခြင်း ကိုရှောင်ရန်။ ၄။ ဆောင်ရန် ရေများများသောက်ရန်၊ ရေသည်ဆေးဖြစ်သည်။ ရေများများသောက်ခြင်းဖြင့် ကျောက်အတုံးအခဲ မဖွဲ့စည်းနိုင်မီ အမှုန့်ဘဝမှာပင် ဆီးများဖြစ်သဖြင့် ဆေးချလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ရေသန့်ဘူးအရွယ် (၂) ဘူးခန့် ရေအနေနှင့်သာ သောက်ရန်။ ရာသီဥတုပူ၍ ချွေးထွက်များလျှင် ရေသန့်ဘူး […]
No Comments on kidneys stone protection
Standard Room June 30, 2020
Knee Replacement June 30, 2020
Chemotherapy June 24, 2020
Endoscopy Center June 24, 2020
Haemodialysis June 24, 2020
MINGALAR Hospital is (150) bedded flagship hospital of MINGALAR Hospitals Group managed by Mahar Ye Mon Co.Ltd. It is located on metropolitan area of Mandalay City, Capital of Upper Myanmar and situated on 58thstreet, between 42nd -43rd, MA-30, Mahar Aung Myay Township.
Copyright Mingalar Hospital 2021.
Made with ♥ by Ultimate Solutions